Taariikhda ugu Fiican Taakulaynta Taariikhda ee St. Louis
Mareykanka Missouri St. Louis
Tag Beyondoonka iyo Filinka
Makhaayad fiican waa doorasho badbaado leh taariikhda, iyo badiyaa waa doorasho weyn. Laakiin waxa ku saabsan wakhtiyadaas markaad rabto inaad ruxayso wax yar? Walaac maaha! St. Louis wuxuu leeyahay fursado aad u weyn oo loo yaqaan 'off-beat times filled with fun and adventure.
01 ee 15
Fasalada Labiska ee Lammaanaha
Sawir Sawir ah Caiaimage / Agnieszka Olek / Getty Images
8021 Clayton Road, Clayton
Baro inaad cunto cunno qaas ah ku sameyso adiga oo kaashanaya khabiir khibrad leh. Qurxinta Quraacda ee Clayton waxay bixisaa noocyo badan oo wax lagu kariyo oo loogu talagalay lamaanayaasha. Haddii aad rabto in aad karisid bacda u fiican, suxuunta la shido ama ka samee keegaga shukulaatada, waxaad ka heli kartaa fasal ku haboon dhadhanka. Marka shaqada la dhammeeyo, fadhiiso oo ku raaxeyso raashinkaaga raashinka leh khamri wanaagsan. Qiimaha fasalada lamaanaha waa $ 125- $ 170.
02 ka mid ah 15
Skyline Casho Qadada
50 Leonor K. Sullivan Blvd., St. Louis
Ka faa'iidayso St. Louis 'meesha ku taal Mighty Mississippi oo leh safar wabiga. Habeenkii Ciyaaraha Cuntada waxaa ka mid ah muusiga jasiirada nool, riwaayado habeenkii ah ee calaamada St. Louis iyo hilibka lo'da ee hilibka lo'da, digaaga, salad, dhinacyada iyo macmacaanka. Iskuuladu waxay tagaan 7da galabnimo, oo u dhow lugta koofurta ee Gateway Arch. Waxaa la bixiyaa Jimcaha iyo Sabtida laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar. Qiimaha waa $ 46 qof.
3354 Iowa Ave, St. Louis
Cagahaaga u soo jiido wax yar oo madadaalo leh ee ku taal Casa Loma Ballroom. Goobtan taariikhiga ah waxay marti galisay xafladaha qoob ka ciyaarka in ka badan 85 sano. Haddii qoob-ka-ciyaarkaagu yahay wax yara yar, ha ka welwelin. Waxaa jira cashar qoob-ka-ciyaar ah oo qoob-ka-ciyaar ah oo badan oo habeenkii ah. Goobtu waxay furan tahay Jimcaha iyo Sabtida waxaana ay bixisaa muusikada muusikada ah ee ka mid ah kooxo caan ah sida Miss Jubilee iyo Humdingers, Fabulous Motown Revue iyo Pennsylvania Slim Blues Band. Qiimaha waa $ 10 qof.
236 N. Euclid Ave, St. Louis
Cunto cusub oo ku saabsan taariikhda casho-dhaqameedka, isku day dufan balasti ah Guriga Whitey House at Central West End. Makhaayadda caanka ah iyo baruhu waxay ku yaalaan jasiiradaha fiican ee laga helo Maraykanka, Kanada, Scotland iyo Ireland. Waxa kale oo ay iibisaa xayeysiiskeeda gaarka ah ee Whiskey, Knob Creek Bourbon. Iyada oo ay la socdaan cocktails gacmeed, makhaayadda makhaayadda waxaa ka mid ah boodada, badda badda iyo baastada. Waxaa sidoo kale jira saacad farxad ah oo habeenkii ah laga bilaabo 11-da duhurnimo, Isniinta illaa Khamiis, iyada oo leh cabitaano cabitaan iyo tifafro yaryar iyo cunto yaryar.
05 ka mid ah 15
Fuulitaanka dhagax weyn
326 S. 21st Street, St. Louis
Markaad rabto in aad firfircoonaato, isku day dhageysiga dhagaxa roogga ee Xadka Upper. Jilidku wuxuu u adeegaa dadka heerarka xirfadeed ee bilowga ah dhamaystiran oo dhammaystiran oo leh khibradaha khibradda leh. Dhammaan inaad sameysid waa inaad qaadataa 10-15 daqiiqo wacyigelin, ka dibna waxaad diyaar u tahay inaad kor u qaado lammaanahaaga. Dhismaha jimicsigu wuxuu leeyahay 35 darajo dabbaalan oo sareeya, godad ballaadhan iyo meelo dhawr ah. Qiimaha koritaanka waa $ 14 qof. Waxaa sidoo kale jira laba meelood oo kale oo xadidan Xadka sare ee Chesterfield iyo Maryland Heights.
750 N. 16th Street, St. Louis
Inta lagu jiro maalinta, Matxafka Magaalada ee ku yaala bartamaha St. Louis waxaa ka buuxsamaya caruurta, laakiin habeenkii waa meel aad u fiican oo kor u kaca. Matxafku wuxuu asal ahaan ka yahay goob dabiici ah, garoon gudaha ah oo leh mowjado, tunnel iyo 10-sheeko gaaban. Cunto iyo cabitaan, waxaa jira kafee dabaqa labaad ee sigaarka, saladh iyo pizza, iyo bar buuxda dabaqa koowaad oo leh DJ DJ oo ciyaaraya muusikada jimcaha iyo sabtida. Matxafka Magaalada wuxuu furan yahay ilaa habeenbarka Jimcaha iyo Sabtiyada. Ogolaashaha waa $ 10 qof ka dib 5 galabnimo
Cocktails & Bowling
1117 Washington Ave, St. Louis
Bowling waxay noqon kartaa wax badan oo madadaalo ah haddii aad ku fiican tahay ama maahan. Flamingo Bowl oo ku yaal bartamaha magaalada St. Louis waa mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan magaalada si ay u garaacaan dhowr biin. Cuntada bowling-ka waxaa loo yaqaan kaliya ma ahan laynkeedii, laakiin waxay u tahay saladhkeeda farshaxanka-farshaxanka oo u adeegta cunto wanaagsan iyo cabitaan saxeexan. Carruurta waxaa la oggol yahay inta lagu jiro maalinta, laakiin 9ka galabnimo kadib, dhammaan macaamiisha waa inay noqdaan 21 jir ama ka weyn.
8 Ronnie's Plaza, South County
Uma baahnid inaad noqotid farshaxan si aad u sameysid abuurid qurux badan Rinjiyeynta leh Noocyo. Fasallada xiisaha leh waa fursad aad ku heli kartid hal-abuurnimo isla markaana u muujiso dhinaca farshaxankaaga. Fasal kasta waxaa hogaaminaya fanaan maxali ah oo siinaya tallaabo tallaabo tallaabo ah oo abuuraya sawirkaaga. Waxaad sidoo kale keeni kartaa cunto iyo khamri xitaa xiiso badan. Fasallada intooda badani waxay ku kacayaan $ 35 illaa $ 45 qof. Marka lagu daro dukaanka Deegaanka Koonfurta, Rinjiyeynta leh Twist wuxuu leeyahay lix goobo kale oo ku yaala St. Louis.
09 ka mid ah 15
Xayawaanka Shaw dabiiciga ah
307 Pinetum Loop Road, Shirka Gogoldhigga
Ku raaxee quruxda dabeecada oo ay weheliso socodka Shaw dabiiciga ah. Lacagta waxay leedahay 14 mayl oo isku xiran oo kala duwan oo ka mid ah deegaannada kala duwan ee dabiiciga ah oo ay ku jiraan jilitaan, caleen iyo kaymo. Qaar ka mid ah jidka loo maro waxay u horseedaa guri sari ah iyo dusha sare. Qaar kalena waxay raacaan qayb degan oo ka mid ah webiga Meramec. Waxa kale oo aad soo qaadan kartaa dambiisha takhasuska leh iyo cunno wanaagsan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah saddexda meelood ee ku yaalla kaydka. Ogolaanshaha waa $ 5 qof.
Clementine's Naughty & Creamery Nice
1637 S. 18th Street, St. Louis
Haddii diyaarkaagu leeyahay ilig macaan, ka dibna u qorshee safarka Clementine ee Lafayette Square. Tani waa qolka barafka ee jilicsan ee dhadhanka qaangaarka ah. Clementine's waxaa loo yaqaan 'kakooban' barafka 'boozy' sida cabbirka shukulaatada, khariidadda maple iyo shandada xagaaga. Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo gacmeed-gacmeed, aan ikhtiyaari ahayn oo ay ka mid yihiin keega gooey, kaafiga qasacadaysan iyo fareebka shukulaatada shukulaatada. Ku dalbo dhowr dhadhan si aad ula wadaagto taariikhdaada.
11 ka mid ah 15
Dalxiisayaal Gardaro ah
110 E. Saddexaad St., Alton, IL
La wadaag habeen habeenimo leh taariikhdaada ku saabsan safar aad u adag oo ku yaal Alton, Illinois. Bulshada yar yar ee ku jirta Wabiga Mississippi waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka yar yar ee ku yaalla Maraykanka. Waxay caan ku tahay sumcadaas iyagoo bixinaya goobo ay ka mid yihiin meelaha ugu cabsi badan sida McPike Mansion, Alton City xabaalaha, Old Alton Prison iyo Mineral Springs Hotel. Waxaa jira labada lugood ee socdaalka iyo tareenada la heli karo. Qiimaha waa $ 25 illaa $ 40 qof.
12 ka mid ah 15
Roobka Hawada ee Ballooniga
2700 Ridge Point Drive, High Ridge
Baaskiilada hawada kulul ayaa hubaal ah inay tahay hal hab oo lagu ogaanayo taariikhda. Maqaalado Guryaha Rainbow ee High Ridge waxay bixiyaan duulimaadyo kooxeed iyo kuwo gaar loo leeyahay. Duulimaadyada Champagne waxaa ku jira baaskiil hal saac ah oo ah ilaa 12 qof, oo ay la socdaan shamaca iyo cirifka. Qiimaha waa $ 185 qof. Duulimaadyada gaarka loo leeyahay ee labada lamaane waxay ku kacayaan $ 800.
13 ka mid ah 15
1601 Dawladda Dardar, Park Park
Qaado indho-indheynta Beerta Xadiiqada oo raaci doonta roogga. Boathouse waxay kalluumaystayaasheeda ku daadineysaa Lake-Postpoon Dispersion ilaa $ 17 saacad. Wareegga wuxuu u horseedaa Grand Basin oo bandhigaya riwaayado waaweyn oo ah Art Hill iyo Museum St. Ka dib markaad raaceyso, ku raaxee cabitaan ama cunnida raashinka ah ee Boathouse ee bannaanka dibadda.
14 ka mid ah 15
9301 Collinsville Rd., Collinsville, IL
Ku rid fardaha at Fairmount Park ee Collinsville. Waxaa jira tartan farabadan oo fagaara ah Talaadada, Jimcaha iyo Sabtiyada laga bilaabo bisha Maajo illaa Sebtembar. Fairmount Park waxay sidoo kale ku siman tahay jinsiyado badan oo ka kala socda Churchill Downs, Belmont Park iyo ciyaaraha kale ee dalka oo dhan. Waxaa jira dhowr makhaayado iyo makhaayado cunto iyo cabitaan oo ay ku jiraan Top of the Turf. Waxay ku taallaa dabaqa saddexaad ee naadiga naadiga ah oo bixiya aragtiyo aad u qurux badan oo ka mid ah rikoorka.
15 ka mid ah 15
Caveman Zipline oo ku yaala Meramec Caverns
Markaad rabto inaad ku qanciso dareenkaaga macquulnimada, taariikhdaada ku qaado Caveman Zipline ee Meramec Caverns. Waxaad u fuuli doontaa geedaha iyo dhanka webiga Meramec inta lagu jiro safarka 90 daqiiqo. Gaadiidka waxaa ka mid ah afar nooc oo kala duwan oo kala duwan ah iyo saddex buundo oo kabadan. Qiimaha waa $ 49 qof iyo boos celin heer sare ah ayaa loo baahan yahay.
15 Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee laga Qabto Sebtembar ee St. Louis
Xilliga Dhibbanaha ee St. Louis: Dhacdooyinka iyo Waxqabadyada Waaweyn
5 Waxyaabaha Ku Saabsan Maalinta Rainy ee St. Louis
Isku day in aad iskaaga Mardi Gras Party ee St. Louis
Makhaayadaha Irish iyo Bacriminta ee St. Louis
Munaasabadaha Qaboobaha iyo Dhaqdhaqaaqa Jiilaal ee St. Louis Area
Sawirrada: Wild Horse Pass Hotel iyo Casino
Moscow ama St. Petersburg ee sannadka cusub?
Romantic Dublin, Muuqaalada Irbadaha iyo Soojiidashada
Maxaad u Baahan Tahay Safarka Wareegtada Waddanka Namibia?
Jadwalka Dhacdooyinka September ee Philadelphia
Suuqa Suuqa Talyaaniga Gust Gallucci
9ka ugu fiican ee Raleigh Hotels ee 2018
11 Waxyaabaha Laga Helo Waxyaabaha Lagu Diyaariyo Maalinta Rainy ee Seattle
Dad Caan ah oo ka yimid Jacksonville
H Hawlaha Waddooyinka ee 2017-Washington, DC
Telefoonka Caalamiga ee Mobal GSM - Telefoon Caalami ah oo Caalami ah
Sharciyada Magaalada New York Waa Inaad Ogaato